Filtrer les éléments par date : mercredi, 26 février 2020
mercredi, 26 février 2020 21:47
Fandaharanasa FIHARIANA - Tetikasa « Akoho Nakà »: 30 mianadahy nisitraka famatsiam-bola mitentina 530 tapitrisa Ariary
30 mianadahy, avy amin'ny Faritra telo eto Madagasikara, Analamanga, Boeny ary Atsinanana, no nisitraka ny famatsiam-bola sy fanohanana ara-tekinika mitentina 530 tapitrisa Ariary ho an'ny tetikasa "Akoho Nakà" androany alarobia 26 febroary 2020. Notontosaina teny amin'ny lapam-panjakana Iavoloha ny lanonana nanamarihana izany.
Ny tetikasa "Akoho Nakà" dia sehatra iray ao anatin'ny fandaharanasa FIHARIANA izay natokana ho an'ny fiompiana akoho fakàna nofo. Hahazo fanohanana ara-tekinika eo amin'ny fiompiana sy ny fandraharahana mba ho tena matihanina tokoa izy 30 mianadahy nahazo famatsiam-bola androany ireo.
Zanak'akoho miisa 40 000 no nozaraina tamin'izy 30 mianadahy androany, ary fanombohana ihany izany hoy ny Filoha Andry Rajoelina, fa mbola maro ny ho avy.
mercredi, 26 février 2020 21:38
Brezila: Firenena voalohany ahitana coronavirus any Amerika latina
Lehilahy iray, 61 taona, no voaporofo fa voan’ny coronavirus taorian’ny fitiliana nataon’ny hopitaly Einstein ao Sao Paulo, ary nohamafisin’ny Institut Adolfo Lutz. Nandalo tany Italia ity lehilahy ity talohan’ny niverenany tao Sao Paulo.
I Brezila no firenena voalohany ahitana coronavirus any Amerika latina.
mercredi, 26 février 2020 19:57
Manarintsoa-Isotry: Cash-Point notafihin’ny jiolahy mitam-basy
Cash-Point iray etsy Manarintsoa-Isotry, Boriborintany Voalohany Antananarivo Renivohitra no notafihin’ny jiolahy mitam-basy ny talata 24 febroary 2020 tokony ho tamin’ny fito ora hariva.
Roa lahy tsy nisaron-tava no nanafika. Nitondra basy sy sabatra izy ireo. Nanapoaka basy ireo jiolahy, olona telo no niantefan’ny bala ; voa teo amin’ny valahany ny iray amin’ireo saingy voalaza fa tsy misy atahorana ny ain’izy ireo.
Nitsoaka niazo Andranomanalina niaraka tamin’ny vola sy finday ireo jiolahy taorian’izay.
mercredi, 26 février 2020 19:50
Besalampy: Voatendry ho Lehiben’ny Distrika Atoa Ralalaharison Oninirina Mamiko
Besalampy: Voatendry ho Lehiben’ny Distrika Atoa Ralalaharison Oninirina Mamiko.
mercredi, 26 février 2020 19:49
mercredi, 26 février 2020 19:47
Ambovombe: Voatendry ho Préfet Atoa Rakotondramanana Solofotahiana Lalaina
Ambovombe: Voatendry ho Préfet Atoa Rakotondramanana Solofotahiana Lalaina.
mercredi, 26 février 2020 19:36
Tolagnaro: Voatendry ho Préfet Atoa Herinjanahary Josoa
Tolagnaro: Voatendry ho Préfet Atoa Herinjanahary Josoa.
mercredi, 26 février 2020 19:33
Antenimiera: Antsoina hivory tsy ara-potoana manomboka amin’ny 04 martsa 2020
Namoaka didim-panjakana miantso fivoriana tsy ara-potoanan’ny Antenimieram-pirenena sy ny Antenimierandoholona ny fanjakana. Hanomboka amin’ny 04 martsa 2020 izany ary tsy hihoatra ny 12 andro.
Lahadinika amin’izany ny hanaovana ny fankatoavana ireo didy hitsivolana miisa 9 noraisin’ny Filoham-pirenena nandritra ny fanomezam-pahefana nomen’ny Antenimieram-pirenena azy talohan’ny nijoroan’ny Antenimieram-pirenena.
mercredi, 26 février 2020 19:20
Arizaka Rabekoto Raoul: Namoahan’ny Bianco « Avis de recherche »
Karohina i Arizaka Rabekoto Raoul, filohan’ny Federasiona malagasy ny baolina kitra. Manamafy izany ny taratasy filazana fikarohana laharana faha-001-20/BIANCO/DG/DTA navoakan’ny Birao mahaleotena miady amin’ny kolikoly androany alarobia 26 febroary 2020.
Nandefasan’ny Bianco fiantsoana voalohany ity Tale jeneralin’ny Cnaps teo aloha ity tamin’ny 20 febroary 2020 hatao famotorana mikasika vola amina lavitrisa tao amin’ny Cnaps izay tsy mazava ny nivoahany, fa tsy nipoitra izy, raha toa ka tonga niatrika famotorana ireo olona voarohirohy miaraka aminy.
Nandefa fiantsoana fanindroany ny Bianco no mivoaka an-gazety ny vaovao fa niala teto Madagasikara i Arizaka Rabekoto Raoul, ary izay no voalaza fa namoahan’ny Bianco ny « Avis de recherche » hikarohana azy hanaovana famotorana azy ka hamaliany eo anoloan’ny fitsarana ireo fiampangana azy.
Araka ny fantatra dia ny Bianco no nangataka tamin’ny ministeran’ny Ati-tany ny hamoahana fepetra tsy fahafahana mivoaka an’i Madagasikara araka ny taratasy laharana faha-019/MID/SG/DGAT/DIE/SCM tamin’ny 3 febroary 2020, mihatra amin’i Arizaka Rabekoto Raoul.
mercredi, 26 février 2020 19:18
Jono: Hisokatra ny 01 marsa 2020 ny fanjonoana makamba
Nanao fanambarana ny eo anivon'ny ministeran'ny fambolena, ny fiompiana ary ny jono, fa hisokatra manomboka ny 01 marsa amin'ny 05 ora maraina izao ny fanjonoana ny makamba na crevettes.
Ho an'ny ilany andrefana kosa dia voaràra ny manjono amin'ny alina, manomboka amin'ny 09ora alina ka hatramin'ny 05 ora maraina, hatramin'ny faha 14 aprily 2020.